Torbee Afrikaa Suuraan: Amajjii 26- Guraandhala 2 tti - BBC News Afaan Oromoo
Torbee Afrikaa Suuraan: Amajjii 26- Guraandhala 2 tti
Suuraawwan filatamoo Afriikaa fi Afrikaanotaa addunyaa mararra jiraatan torbee kana keessa
Goodayyaa suuraa Senegaalitti mana barnootaa magaala gudditti Daakaar irraa fagaatee argamutti shamarree barnoota haalaan hordofaa osoo jirtuu kaafamte. Senegaal yaa'ii idila addunyaa biyyoota guddachaa jiran keessatti barattoota hedduu gara mana barumsaatti erguuf karoora doolara biiliyoona heddun lakkaawamu ramaduuf jiru keessumeesiteetti.
Goodayyaa suuraa Naayijeeriyaatti Gaazexessaan Fireenchi tokko biyyitti keessa manni kitaaba itti gurguran jiraachuu gaafachuu isaatiin lammileen biyyatti aarii keessa turan. Manni kitaabaa Jaaz Hool Leegoos mana kitaabaa dhugumatti qabaachuu agarsiiseera.
Goodayyaa suuraa Kibxata darbe Keeniyaatti namoonni kumaatamaan lakkaawaman wayita hoogganaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaan sirna kakuu galu beekamtii hinarganne raawwatan hordofaniiru. Osoo Raayilaan pireezidantii ta'ee filatameera ta'ee maallaqni biyyatti amma waan inni fakkachuu danda'u deegaraan isaa tokko agarsiseera.
Goodayyaa suuraa Amajjii 30 Doktaroonni Aljeeraa tajaajila tolaa hawaasaa dirqama ta'e balaaleffachuun magaalaa Aljeersitti ji'a lamaaf hiriira mormii eegalaniru.
Goodayyaa suuraa Guyyoota muraasa dura Dubartiin gabaabduun addunyaa lammii Indiyaa Ji'ooti Amge, Nama dheeraa Addunyaa kanaa lammii Tarkii Sultaan Koosen waliin sagantaa suuraa adda ta'eef Masriitti wal arganiiru.
Goodayyaa suuraa Tuniiziyaatti namoonni hedduun Pireezidantii Firaans Imaanu'eel Maakroon amma biyyoota Kaaba Aafrikaa daawwachaa jiran waliin suura ka'uuf ijibbaatarra jiru
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaattis suura of kaasuun wanta namoonni kumaan lakkaawaman waayita Atleetii Jaamaayikaa fageenya gabaabaa Yuuziiyeen Boolt gaafa wiixataa Johaanisbargitti argan raawwataniidha.
Goodayyaa suuraa Zakaariyaa Hadraaf, taphataan Morokoo tapha Liibiyaa wajjiin taphataniin miidhamuu isaatiin hirmaannaa waancaa Afrikaa ala yeroo ta'u suura muli'isu.
Goodayyaa suuraa Dubartiin Ayivooriikoosti qarqara gaalaana naannoo 'Grand Basaam' jedhamuutti osoo imaltuu suura kaate
Goodayyaa suuraa Roobii galgala eenyutu osoo ji'a hin argiin bule? Ji'a Yugaandaatti bantii gaara Kadaamitti guuttee mula'attu kunoo.
Suuraawwan kuneen kan argaman AFP fi Rooyitarsi irraati.